Ekeresimesi ihe ịchọ mma ọzọ iji mee ụmụaka | Crafts Na
Maria José Roldan | | Ọrụ katọn, Ihe eji eme ekeresimesi, Ọrụ ụlọ, Crafts maka ụmụaka
Krismas na-abịa na nro na-amalite igosi na obere ụlọ ... na ọ bụghị obere nwata! Ya mere, ugbu a bụ oge kachasị mma iji rụọ ọrụ aka ekeresimesi ka ọ dị otu a alsomụaka na-echekwa na ha bụ ọkaibe nke ịchọ mma ụlọ.
Ọrụ nka anyị na-ewetara gị taa dị mfe ịme, ụmụ gị ga-ahụkwa ya n'anya. E mesịa, mgbe ị chịkọtara osisi Krismas n'ụlọ ị nwere ike iji ya dị ka ihe ịchọ mma, ma ọ bụ ịnwere ike itinye ya ebe ọzọ, Ma obu inwere ike iji ya dika kaadi onyinye nye onye puru iche!
1 Akụrụngwa ị ga-achọ
Akụrụngwa ị ga-achọ
1 ibe kaadiboodu
1 akara ojii
1 ka 3 obere agba bọọlụ
1 bit nke eriri na agba Krismas
Jiri mpempe kaadiboodu, belata obere kaadi nke nha ị tụlere mana enwere ike itinye ya dị ka ihe ịchọ mma na osisi ahụ, ya bụ, ọ gaghị adị oke oke ma ọ bụ pere mpe. Ozugbo inwere ya, bepu ma pensụlisi isi nke onye na-adọrọ adọrọ mara mma.
Nwere ike ịgbaso ihe nlereanya ị hụrụ na foto. Mgbe ị dọpụsịrị ya na pensụl, gafere ahịrị ndị na-eji oji ojii mee ka ọ dị mma.
Mgbe ahụ, jiri pensụl, dụọ akụkụ ahụ elu dị ka ị na-ahụ na mbiet ahụ, nke mere na enwere oghere ebe ị nwere ike itinye ma kee eriri agba. Ozugbo emere nke a, kpoo imi nke reindeer ka ọ nwekwuo ọmịiko.
Naanị ihe ị ga-eme bụ ịpinye obere gluu, kpoo bọọlụ owu na-acha agba agba ma hapụ ya. Ọ ga-adị njikere! Ọ bụ ezie na ịchọrọ ịnye ya dị ka onyinye ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ nke pụrụ iche, ị nwere ike ide ahịrịokwu Krismas mara mma na azụ nke ihe ịchọ mma ekeresimesi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts na ihe » Ọrụ katọn » Ekeresimesi ihe ịchọ mma ekeresimesi iji mee ụmụaka
Mfe Origami Koala Ihu
Origami Oke oyibo Ihu